Madaxweynaha Masar oo maanta wareejiyana gudoomiyaha Midowga Africa. – Radio Daljir
Madaxweynaha Masar oo maanta wareejiyana gudoomiyaha Midowga Africa.
Febraayo 9, 2020 11:36 b 0
Madaxweynaha Dolwadda Koofur Africa, Cyril Ramaphosa ayaa la filayaa in uu xilka gudoomiyaha midowga Africa kala wareeggo dhigiisa Masar Abdel Fattah al-Sisi, oo mudo hal sano ah hayay jagada sanadkiiba dal loo dhiibo.
Khilaafyada ka jira dalalka gudahooda iyo dhaqaale la’aanta soo wajahday ciidamada nabad ilaalinta sidii wax looga qaban lahaa, ayaa udub dhexaad u ah shaqooyinka horyaalla hogaanka cusub ee Midowga Afrika.
Waxaa jira warar sheegaya in madaxda Africa ay ku kala qeybsameen arinta Libya, iyadoo Masar ay diiday in Ururka uu farageliyo arrimaha dalka Liibiya, oo ay faragelin ku hayaan dalalka Khaliijka Carabta iyo kuwa reer galbeedka.
Xoghayaha guud ee Qaranada Midoobay, Antonio Guterres ayaa ugu baaqay madaxda Africa in ay meel iska dhigaan muranka dhexdooda ah, islamarkaana xoogga isagu geeyaan in ay xal nabadeed u raadiyaan colaadda Libya,oo soo jiitamaysay tan iyo sanadkii 2011.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kamaida hogaamiyeyaasha ku sugan Addis Ababa ee ka qeybgalaya kulanka Midowga Africa, kaa soo furmay maanta, berrinaha lasoo xirayo.
Maxaa ka jira in Ruushka uu Saldhig Ciidan ka furanayo Soomaaliya?.
Maxamuud Sayid Aadan: “ Rabitaan shaqsi ah iyo aragti xun oo aanan shaqeyn cawaaqib xumo ayay reebeysaa”